"Fa ankehitriny isika mizaha ao amin’ny fitaratra ka tsy mahita marina. 1 Korintiana 13:12 (Hoy Jesosy tamin’ny apostoly Petera:) Izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatrizay. Jaona 13:7 Fa finoana no andehanantsika, fa tsy fahitana." 2 Korintiana 5:7
Rehefa afaka avy tany amin’ny toby mampivarahontsana fanagadrana ireo Jiosy tany Ravensbrück i Corrie Ten Boom, noho ny fifandisoana, dia nampiasa ny androny sisa ho vavolombelon’ny fitiavan’Andriamanitra. Voasedra mafy ny finoany tamin’ny zava-mampihoron-koditra niainany isanandro, ary tamin’ny nahafatesan’ny rainy sy ny rahavaviny, izay samy voatana tao ihany koa, nefa dia nandresy nanoloana fahoriana toy izany.
Rehefa mampita hafatra izy, dia tia mampiasa kisarisary. Koa tsy niala tao anaty poketrany ny tapa-damba iray nisy peta-kofehy, natao tamina kofehy matroka ary kofehy volafotsy sy volamena. Ao amin’ny lafy ratsiny dia tsy nahitana afa-tsy kofehy mifangaroharo. Asehon’i Corrie io, dia hoy izy: «Ity peta-kofehy ity dia toy ny fiainantsika. Andriamanitra no mifidy izay loko sy sary tiany. Tsy mitsahatra Izy miasa amin’izany, mampifangaroharo ny andro maloka sy ny andro mibaliaka… Hadinontsika matetika fa Andriamanitra dia mahita ny asany eo amin’ny lafy tsarany, fa isika kosa tsy mahita afa-tsy ny lafy ratsiny. Rahatrizay, rehefa vita ilay peta-kofehy ka ho afaka manontany Ilay Mpanao peta-kofehy isika, dia ho fantatsika fa nilaina na ny kofehy mainty na ny kofehy volamena, satria samy ao amin’ilay môdely nosafidin’Andriamanitra avokoa.» Avy eo dia avadik’i Corrie Ten Boom ilay tapa-damba, ka satroboninahitra volamena no hita, misolo ireo kofehy mifangaroharo teo.
Na dia tsy mahatakatra ny drafitr’Andriamanitra ho an’ny fiainantsika aza isika, dia aoka hatoky Azy. Ny tanjony dia ny “hanisy soa anao any am-parany” (Deoteronomia 8:16). Hatanjahin’ireo teny fampanantenany isika, resy lahatra fa Andriamanitra dia Tsitoha ary hanome antsika ny hery ilaina isanandro, hany isika ka afaka hanana fiadanam-po ao anaty fotoan-tsarotra.